Gaafiin aangoo gadhiisuu Obbo Haayilamaariyaam paartiin fudhatame - BBC News Afaan Oromoo
Gaafiin aangoo gadhiisuu Obbo Haayilamaariyaam paartiin fudhatame
Goodayyaa suuraa Ministira Mummee Obbo Haayilamaariyaa Dasaalanyi
Ministirri Mummee Obbo Haayilamaariyaam Dasaalanyi aangoowwan dura taa'aa Adda Warraaqsa Dimokraatawa Ummattota Itoophiyaafi ministira mumme gadhiisuuf gaaffiin dhiyeefatan Koree hojii raawwachiftuu ADWUItiin mirkanaa'usaa himame.
Obbo Haalamaaruyaa ibsa TV mootummaa EBC irratti kennaniin akka himanitti, gaaffiin isaanii hanga mana maree bakka bu'oota ummataafi dhaabatti dhiyaate hanga deebii argatuutti itti gaafatamummaarra akka turan himan.
Akkasumas Adda Dimokraatawa Waraaqsa Ummattota Itoophiyaa (ADWUI) fi dhaabbata Waraaqsa Dimokraatawaa Ummattota Kibba Itoophiyaatiifis gaaffisaanii galfachuun fudhatama akka argateefi amma akka koreen jiddu galaa raggaasisuuf eegaa jiraachu himaniiru.
Sababii dhabiinsa tasgabbii biyyattii keessatti umameenis lubbuun namoota hedduu baduusaafi kanneen hedduu bakka jireenyaa isaanitii buqa'u kan caqqasan Obbo Haayilamaariyaam, rakkoolee kanneen biroo mul'ataa jiran furuuf ADWUIn sadarkaa garaagaraatti haaromsa hojiirra olchuuf yaalaa jira jedhaniiru.
Obbo Haayilamaariyaam nageenya biyyatti walitti fufiinsa taasisuu keessatti kan gaheesaanii bahuuf jechaafi qaama furtaataa ta'u barbaadeen fedhiifi hayyama kootiin aangoo gadhiisuuf gaafadhees jedhaniiru.
Gaaffiin isaanii murtee dhumaa kan argatuuf waajjira ADWUI waan ta'eef walgahii dhaabichi dhiheenyatti taasifatu irra murte akka argatu amantaan qabas jedhaniiru.
Akkasumas gaaffiiwwan uummatichi kaasaa jiruuf deebii kennuun barbaachisaa ta'u nan amana kan jedhan Obbo Haayilamaariyaam, haaluma kanaanis gaaffiiin hojii gadhisu koo atatamaan deebii ni argata jechuunakka amanan himan.
Saa'aatii muraasaan booda ammoo gaaffii aangoo gadhiisuu isaanii koree hojiiraawwachiiftuu ADWUIn fudhatamu isaa bakka Obbo Shifaraawu Shiguxxee Itti gaafatamaan Waajira ADWUI midiyaa mootummaa biyyattiin ibsaniiru.
Waajjirri Adda Dimokraatawa Waraaqsa Ummattota Itoophiyaas nama isaan bakka bu'uu haala bilisa ta'een ni filata jechuu kan amanan ta'us himaniiru.
Akkasumas ummanniifi mootummaan haala dimokiraatawa ta'een taayitaa dabarfu yeroo seena akka galmeessu nan aman akkasumas, minisira mummichaa duraanii jedhamuun akka waamamanilleen amantaan qaban jedhaniiru.
Bara jireenyaa hafaa koottis adeemsa misoomaa keessatti kan gahee kootii gummaachuuf qophaa'odha jedhaniiru.
Namoonni dhimma kanarratti yaada maal qabu laata?
Oduu aangoo gadhiisuu minisitira muummichaa ilaalchisee yaadasaanii BBC'f kan keennan Obbo Mul'aatu Gammachu Minseensi ggantoota OFC, ''dubbiin kun duraansi oggantoota ADWUI aangoo gadhiifnee jirra jedhanii booda ammoo deebii'anii waan argamaniif amanuun nama dhiiba. Haa ta'u malee aangoo gadhiisuun Obbo haayilamaariyaa kana duras yeroo baayyee kan dubbatame, jedhaniiru.
Kana malees, isaaniifi mootummaan isaanii olaantummaa seeraa kabachiisuu, ummata tasgabeessuu, nageenya fiduufi oofiin seera kabajuun kuun akka kabajan taasisuu akkasumas bulchiinsi gaariin akka mirkanaa'u taasisuun irraa eegama ture; kanas raawwachu hindandeenye jedhaniiru.
Kanaafu Obbo Haayilamaariyaam sababii kanaaf aangoo gadhiisu taanaan mirgaafi waan ta'u qabuudhas jedhaniiru.
Ibsi motummaa federaalaa hinguyyaafannee?